Sandals Foundation Na-enye Enyemaka nye Onye Kachasị Ajọ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Hotels & Ebe ntụrụndụ » Sandals Foundation Na-enye Enyemaka nye Onye Kachasị Ajọ
Akụkọ Antigua & Barbuda • Akụkọ ọhụrụ Barbados • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • omenala • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Grenada na -agbasa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • investments • Akụkọ gbasara Jamaica • Akụkọ okomoko • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • News • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Safety • Akụkọ Lucuc na -agbasa • Tourism • Ego njem | Atụmatụ njem • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Kemgbe iwebata ọrịa na-efe efe COVID-19 n'ụsọ oke osimiri Caribbean, ndị Akpụkpọ ụkwụ Sandals etinyela akụrụngwa ma kwado nkwado nke gọọmentị, ndị otu na-abụghị ndị gọọmentị, na ndị mmekọ ụlọ ọrụ iji wusie ụlọ ọrụ ahụike ike, kwado ndị ọrụ na-arụ ọrụ n'ihu, ma nye ndị enyemaka kachasị emetụta gụnyere ndị agadi na ndị ezinụlọ nọ na ndị enyemaka na ndị njem na-eme njem nleta.
Iwusi Ọrụ Nlekọta Ahụike
Sandals Foundation enyefela JM $ 5 nde na Privatelọ Ọrụ Na-ahụ Maka Onwe nke Jamaica (PSOJ) ka ha welitere ngụkọta $ 150 nde iji zụta ndị na-agba ume maka ụlọ ọgwụ ndị Ministry of Health and Wellness (MOHW) họpụtara na mba ahụ.
Site na onyinye mmesapụ aka sitere na Companylọ Ọrụ United States, Tito's Homemade Vodka, Sandals Foundation akwadebewo ebe ezumike na-adịghị mma maka ndị dọkịta na ndị nọọsụ na St Ann's Bay Regional Hospital na Jamaica ndị ga-aza ndị ọrịa Covid-19. Thelọ ezumike ahụ nwere ebe ihi ụra na-ehi ụra nke nwere akwa ejima, ebe sara mbara nke nwere reclin atọ na telivishọn na ebe iri nri na microwave, ketulu elektrọniki, friji na tebụl iri nri anọ.
Sandals Foundation wetara nri na ihe ọ forụverageụ maka ndị dọkịta ahụike 70 gụnyere ndị dọkịta na ndị nọọsụ nọrọ otu ụbọchị na mgbochi ọrụ mberede na Annotto Bay, St. Mary, Jamaica. Nri ahụ nyere aka ịkwado ndị otu dị n'ihu ka ha nwalere ọtụtụ narị mmadụ, gwọọ ndị ọrịa ma duzie ọrụ mmata iji mee ka ndị otu obodo nwee ike inye aka igbochi mgbasa nke nje a.
Sandals Foundation nyekwara ego ọzọ $ 2 na PSOJ COVID-19 Response Fund iji kwado nchekwa nri na mkpa ọdịmma na Jamaica. Ego a bu mmekorita otutu ndi mmadu na Council of Voluntary Social Services (CVSS), American Enyi nke Jamaica nke na-achikota ma na-ekesa ihe nlekota ndi a na-eme kwa izu nye ndi amaala ndi kacha adighi ike na ndi mmadu adighi aka.
Dịka akụkụ nke $ 2 nde PSOJ COVID-19 Jamaica Response Fund, ụfọdụ ihe nlekọta 700 ka enyerela ka ewebata ezinụlọ olileanya na St. James, Jamaica. Emere omume ndị a site na enyemaka nke ndị mmekọ ndị ọzọ dịka Food for the Poor, Jamaica Constabulary Force, United Way nke Jamaica na Red Cross Jamaica.
Anyị na ndị ọrụ kọmitii mmepe obodo na mmekorita ya na Sandals South Coast Resort, anyị azụọla ngwungwu iri ise (50) nke ngwa ahịa sitere na Lasco Chin Foundation wee kesara ndị agadi nọ n'obodo Fustic Grove, Crawford, Hill Top, Dalintober na Sandy Ground na St. Elizabeth, Jamaica.
Site na mmekorita ya na Sandals Negril ma na-arụkọ ọrụ ọnụ na Hanover Poor Relief, ndị ikpe nke Peace na ndị isi okpukpe, a zụtara ngwugwu nlekọta site na Lasco Chin Foundation wee nyefee ndị agadi, ndị na-enweghị ebe obibi na ndị dara ogbenye aha ha na obodo ime obodo Chester Castle na March Town na Hanover, Moreland Hill obodo na Westmoreland na Red Bank na Genus obodo dị na St. Elizabeth, Jamaica.
Ntọala agbatịwo enyemaka ego maka ndị nnata nke agụmakwụkwọ sekọndrị anyị, "Care for Kids" programmụ iji nyere ezinụlọ ha aka igbo mkpa ha na-eri na ọdịmma ha n'oge a.
Sandals Foundation abanyela na ngalaba mgbasa ozi nke Ebenezer Union Baptist Church dị na Exuma, Bahamas iji nweta ego ị ga-eji wee nweta nri. Ego anyị ga-enye ụgwọ nri nri iji zụọ ezinụlọ 50 na-adịghị ike.
Site na isoro Hanover Poor Relief na Justices of Peace na isi obodo Westmoreland na obodo St Elizabeth, a zutara 50 nlekota nlekota site na Lasco Chin Foundation ma nyefee ndi okenye, ndi na enweghi ulo na ndi edebara aha ha n'ime ime obodo Chester Castle. , March Town, Moreland Hill, Red Bank, na Genus.
Etinye ego na Mmụta na ibi ndụ
Iji kwado mkpa mmụta na ntanetị nke ndị sonyere na onye mmekọ anyị, Grow Well Golf Programme na St. Lucia, a zụtala laptọọpụ iji nyere ndị ntorobịa aka ịnọ na usoro agụmakwụkwọ ha.
Sandals Foundation na-enyekwa aka ịkwado mkpa mmụta mmụta dị anya nke ndị nnata mmụta "Care for Kids" site na ịnye ngwaọrụ kọmputa mbadamba na ikpuchi ọnụ nke njikọta ka ụmụ akwụkwọ wee nwee ike ịntanetị ma gaa n'ihu na ọmụmụ ha.
Anyị na-enye ego maka ndị mmadụ n'otu n'otu bụ ndị so na ndị ọrụ okike mpaghara na-arụ ọrụ n'ime mpaghara ndị njem. Ndị ọrụ a bụ isi na-ebute ọrụ ha n'ụzọ dị njọ n'ihi mmechi nke ụlọ ọrụ ndị njem na ịkwụsị ire ere n'aka ndị ọrụ aka nke mepụtara ngwaahịa maka ebe ntụrụndụ họtel. Onyinye ego ahụ na-enyere ihe dị ka ndị ọrụ ntinye ọkọnọ 50 ihe dị mkpa maka onwe ha na ezinụlọ ha.
Ohere Ọdịnihu nke 'Dịghachi Mma'
Sandals Foundation ga-aga n'ihu na-azaghachi maka mkpa mmekọrịta mmekọrịta nke Caribbean site na:
Iwusi ike nke ụlọ ọgwụ, ụlọ ọgwụ, na ọrụ nlekọta ahụike mpaghara na ndị dabere na njem nleta;
Inye ọdịmma nke ndị agadi na ndị kachasị ngwangwa bụ ndị na-adabere na ndụ ndị ọrụ ụlọ ọrụ maka nri ha; na
Dị ka akụkụ nke usoro iji nweta usoro atụmatụ ogologo oge maka "ịlaghachi n'ụlọ akwụkwọ" iji nyere ụmụaka aka / ngalaba nke ndị ọrụ n'ime ụlọ ọrụ njem. Onyinye ndị a ga-adịịrị ndị na-enyocha ma ha bụ ma ọ bụ na ha abụghị ma ọ bụ na-arụ ọrụ na Sandals ma ọ bụ osimiri Resorts.
Anyị na-akpọ gị òkù ka ịwelite ọrụ anyị site na isoro anyị Facebook, Instagram na Twitter.